သူဌေးကဆင်ခြေဖုံးဧရိယာညှပ်သို့မဟုတ်မပါဘဲလုပျ ညှပ် ။ သို့သော်၎င်း၏စစ်ဆင်ရေး၏သင်တန်းအချို့အကြောင်းပြချက်အဘို့ဤယူနစ်ကိုစတင်ရန်တာတွေရပ်စဲဘယ်မှာအခြေအနေများဖြစ်နိုင်သည်။ ဤရွေ့ကား, များအတွက်အကြောင်းပြချက်အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်ဆီညှပ်မစတင်အဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှာတွေ့ကြပါစို့။
အကြောင်းရင်းများ - အဘယ်ကြောင့်ညှပ်မစတင်
အဆိုပါဓာတ်ဆီညှပ်အပြီးအပိုင် start သို့မဟုတ်ငျးကုဖို့ခက်ခဲပြီးအဘယ်ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ရန်, သင်တသမတ်တည်းယင်းယူနစ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများစစ်ဆင်ရေးစစျဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာသိုလှောင်မှုညှပ်ပြီးနောက်ဒီလိုလုပ်ဖို့အထူးသဖြင့်အရေးကြီးပါသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူညှပ်၏အဓိကအကြောင်းတရားများဖြစ်ကြသည်:
မစတင် trimmers သောတရားခံ, ကအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းလောင်စာရေနံ-ဓာတ်ဆီအရောအနှောများဖြစ်နိုင်သည်။ ဟင်းချက်ကြောင့်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတင်းကြပ်စွာဖြစ်သင့်သည်။ ကတစျခုလုံးကို piston ညှပ်၏ပျက်ကွက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပါတယ်ကတည်းကချွေတာသုံးစွဲ, သက်ဆိုင်ရာမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုဆုံးရှုံး, အချိန်ကျော်ဓာတ်ဆီပိုလျှံအဖြစ်လွန်းလောင်စာဆီအရောအနှောချက်ပြုတ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
သငျသညျသူတို့အနိမ့်ကထုတ်တဲ့နှင့်အတူစျေးပေါဓာတ်ဆီဖြည့်ပါလျှင်ထိုကဲ့သို့သော Stihl, Husgvarna နှငျ့အခြို့ကိုအခြားသူများအဖြစ်ဓာတ်ဆီညှပ်အမှတ်တံဆိပ်ကိုစတင်ရန်မကိုသိသင့်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤယူနစ်များအတွက်သာအရည်အသွေးမြင့်မြင့်မားကထုတ်တဲ့လောင်စာကိုအသုံးပြုရပါမည်။
အစမှာညှပ်ငျးကုညာဘက်လျှင်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဖယောင်းတိုင်နှင့်အတူရေလွှမ်းနေပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်ကဝက်အူဖြုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှင့်ဂရုတစိုက်နာရီဝက်အဘို့အခြောက်လှန်း။ ထို့နောက်ကင်မရာသောပိုလျှံလောင်စာတွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်တစ်ဖယောင်းတိုင်ကနေကျပ်ခိုး clean ပြန်ပေါ်မှာထားတဲ့တံစဉ်ရှိသည်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။
အသစ်ရဲ့ဓာတ်ဆီညှပ်မစတင်ပါလိမ့်မယ်လျှင်, အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမီးပွား၏မရှိခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖယောင်းတိုင်လောင်စာခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်အလင်းပါဘူးရှိရာ slot ကကြောင့်ဖြစ်ပျက်။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဓာတ်ဆီပေါင်းလိုက်သော connection ကိုဖယောင်းတိုင်အနည်းငယ်ကျဆင်းမှုနှင့်အတူငယ်။
ဓာတ်ဆီညှပ်ကြောင့်လေထုသို့မဟုတ်လောင်စာ filter များ၏ပိတ်ဆို့မှုမှခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားလိမ့်မည်။ ဒါဟာလူသစ်တွေနဲ့အတူထိုအအစားထိုးရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ထွက်ပေါက်ရုပ်သံလိုင်းနှင့် breather ခုံဖိနပ်နိုင်ပါစေ။ ချုံ့သည်ဤဒြပ်စင်ရှင်းလင်းရေးကြောင့်မည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲယူနစ်ကိုစတင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလိမ့်မည်။
နောက်ထပ်အကြောင်းရင်း, အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးမီးပွားလည်းမရှိတောင်မှသောအခါ, carburetor ပိတ်ဆို့စေခြင်းငှါ, တစ်ဦးဓာတ်ဆီညှပ်မစတင်။ အဆိုပါလိုင်းများနှင့် orifices သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့တစ်ဦးတွန်းခြင်းဖြင့်ချုံ့လေနှင့်အတူပြေတတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သင်က carburetor နှင့်အထူးအဝတ်လျှော်ဆေးကြောသန့်စင်ဖို့ကိုသုံးနိုင်သည်။
အဆိုပါ pads အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ carburetor များမှာပါကသူတို့ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤစက်ကိရိယာ၏သမာဓိချိုးဖောက်မှုတစ်ဦးအမှုကတော့ကွာဗူရတော၏ချွတ်ယွင်းနေစိတျအပိုငျးကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်အစားထိုးရပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါညှပ်အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စတင်မှုကြောင့်စတင်မရနိုင်ပါ။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်ရန်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာအတွက်ပိုကောင်း trimmers ။
ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ dvuhvostok ရဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Beets ကိုစိုက်လုပ်နည်း - ကောင်းတစ်ဦးစပါးရိတ်ရာကာလ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ
Cyclamen - အစားထိုး
အိမ်မှာ Passionflower အမြိုးအနှယျ
Spiro - မျိုးစိတ်နှင့်အမျိုးပေါင်း
ဒေါ်လာစျေး Tree - မျိုးပွား
အပူလေဖြတ် - ကလေးများအတွက်ရောဂါလက္ခဏာတွေ
Eyelets နှင့်အတူက Canvas မြတ်သော
Horsefly ကိုက် - ဖောဆက်ဆံဖို့ကိုဘယ်လို?
18 က MS-13 အများစုအမေရိကန်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောဂိုဏ်းထုံးတမ်းများနှင့်အစဉ်အလာ
Andipal Aveksima ကူညီပေးသည်သောအရာကို မှစ. ?
အမျိုးသမီးများသားမွေးဦးထုပ် - အရှိဆုံးဖက်ရှင်မော်ဒယ်
စိတ်ကျရောဂါ syndrome ရောဂါ
Fertilizing Currant နွေဦး